အခြေခံ gelatin စာရွက်စာရွက် + အမျိုးမျိုးသောအသုံးပြုမှု - အချက်အပြုတ်နည်းစနစ်
gelatin စာရွက်စာရွက်သည်အမှုန့်မျှသာဖြစ်သော gelatin ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ရေတွင်ပျော်ဝင်ပြီးနောက်ထို့နောက်ပါးလွှာသောစာရွက်တွင်ခြောက်သွေ့အောင်ပြုလုပ်ထားသည်
ဒါကငါ့ gelatin စာရွက်စာရွက်။ ငါသည်ငါ့အပါအဝင်အရာအမျိုးမျိုးအတွက်ဒီစာရွက်ကိုအသုံးပြုပါ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လိပ်ပြာတောင်ပံ ငါ့သမီး၏ bug ကိုမွေးနေ့ကိတ်မုန့်အဘို့, ငါ့အဘို့ရွက်လွှင့် ပင်လယ်ဓားပြသင်္ဘောကိတ်မုန့် နှင့်မကြာသေးမီကငါ့ စားသုံးနိုင်သောတောက်ပသော နည်းပြ သငျသညျဂျယ်လတ်ရွက်စေနိုင်သည်!
သင်ကစာရွက် gelatin အမျိုးမျိုးသောအရောင်များကိုအောင်အစားအစာအရောင်, ဖုန်မှုန့်သို့မဟုတ်စားသုံးနိုင်သောသတ္တုအမျိုးမျိုးနှင့်အတူပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။
gelatin ရွက်လွှင့်နိုင်ရန်အတွက် gelatin အရောအနှောကိုပလပ်စတစ်အဖုံးပေါ်သို့ဖြန်းလိုက်သည်။ gelatin သည်အရည်မဟုတ်တော့ပါကသင်ပလပ်စတစ်အပိုင်းအစတစ်ခုကိုတစ်ညလုံးခြောက်။ တစ်ညတည်းခြောက်နိုင်သည်။
နောက်တစ်နေ့တွင်သင်ကပလပ်စတစ်ထုပ်ပိုးပြီး၎င်းကိုလှပသော gelatin ရွက်လွှင့်နိုင်သည်။
ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာလိုသောကျွန်ုပ်၏ကြံစာရွက်မင်္ဂလာဆောင်ကိတ်မုန့်သင်ခန်းစာတွင်။
အခြေခံ gelatin နည်းနည်းရေအေး၏ ၁/၄ ခွက်တွင်ပျော်ဝင်နေသောအမှုန့် knox gelatin (packets မဟုတ်) ၅ လက်ဖက်ရည်ဇွန်းဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ သိရန်အနည်းငယ်သောအရာများရှိသည်။ သငျသညျအစားအစာအရောင်, ပုလဲဖုန်မှုန့်, ​​သတ္တုဖုန်မှုန့်သို့မဟုတ်သင်ဤအခြေခံစာရွက်ထဲမှာလိုခငျြတစုံတခုကိုမျှထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်သင်ခန်းစာကဲ့သို့သော gelatin ပူဖောင်းများပြုလုပ်ရန်အလွန်ကောင်းသည် Sara Myers ပူဖောင်းကိတ်မုန့်သင်ခန်းစာ ။
အမှုန့် gelatin ကိုရေပေါ်မှာဖြန်းလိုက်ရင်ဖြေးဖြေးသွားပြီးအားလုံးကိုရေထဲကိုအညီအမျှစုပ်ယူပါစေ။ အရည်ပျော်သွားသည့် gelatin အမှုန်များမတွေ့လျှင်ရေထဲသို့အနည်းငယ်ထပ်ထည့်ပါ။ ဒါဟာခြောက်သွေ့ဖို့ပိုကြာပေလိမ့်မည်ဒါပေမယ့်သင်မဆိုစုပ်ယူ gelatin ကျန်ရှိသောချင်ကြဘူး။
အရောအနှောအကြောင်းကို5မိနစ်ထိုင်ကြကုန်အံ့။ ၎င်းကို“ blooming” ဟုခေါ်သည်။ အခြေခံအားဖြင့် gelatin ကိုအပြည့်အဝစုပ်ယူသည့် gelatin ၏လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ဒါထက်ပိုပြီးထူးဆန်းတဲ့အသံ။
သင်၏ gelatin ပွင့်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းကိုညင်ညင်သာသာအပူပေးရန်သေချာစေပါ။ ပထမ ဦး ဆုံးမှာစက္ကန့် 30 ထို့နောက် 15 နောက်တဖန်တိုး။ အကယ်၍ သင်သည် gelatin ကိုပြုတ်သို့မဟုတ်အပူပေးလျှင်၎င်းသည် gelatin ၏သမာဓိကိုအမှန်တကယ်ပြောင်းလဲစေပြီး၎င်းသည်မှန်ကန်စွာမသတ်မှတ်နိုင်ခြင်းကြောင့်သင်၏ gelatin ကိုနူးညံ့သိမ်မွေ့ပါစေ။
သင့်ရဲ့အရောအနှောအအေးပြီးတာနဲ့သူကမိနစ်စုံတွဲတစ်တွဲထိုင်ပါစေ။ အဖြူရောင်အမြှုပ်အချို့သည်ထိပ်သို့တက်နေသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ဒီအမြှုပ်ကမင်းရဲ့သူငယ်ချင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး သငျသညျအကြှနျုပျကိုအဘို့ပြုသကဲ့သို့အမြှုပ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေမဟုတ်လျှင်သင်တစ် ဦး ဇွန်းနှင့်အတူကြောင်းချွတ် scoop ချင်တာပေါ့ gummy ဘီယာ အတွက်သင်ခန်းစာ hရာဟမ်ဘာဂါကိတ်မုန့်သင်ခန်းစာ။
ယခုတွင်သင်သည်အရောင်များ၊ ဖုန်မှုန့်များစသည်တို့ကိုပေါင်းထည့်နိုင်သည်။ ငါ gelatin ကိုပလပ်စတစ်အိတ်တစ်လုံးပေါ်သို့ဖြန့်ပြီးတစ်ညလုံးခြောက်သွေ့စေသည်။ အခြောက်လှန်းသကဲ့သို့အတွန့်တွန့်သွားလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်ပြောင်းဖူးရည်အနည်းငယ် (၁-၂ လက်ဖက်ရည်ဇွန်းခန့်) အနည်းငယ်ထည့်ပါကဂျယ်လတ်ကိုအနည်းငယ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စေလိမ့်မည်။ ဒါက wafer paper ကိုဖြတ်ဖို့ကောင်းတဲ့အရောအနှောပါ။
ဒါကြောင့်အခြေခံအားဖြင့်ပဲ! ဒီ gelatin စာရွက်ကိုကောင်းကောင်းသုံးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ မှတ်ချက်များတွင်သင်နှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများရှိလျှင်သို့မဟုတ်အကူအညီလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်အားအသိပေးပါ။
ဒီဟာကဂျယ်လတ်အောင်အတွက်အခြေခံစာရွက်ပါ တခါတရံသူကစာရွက်တစ်ရွက်ကိုခြောက်သွေ့အောင်လုပ်လိုက်တယ်၊ တစ်ခါတလေပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အောင်ပြုလုပ်ဖို့ပြောင်းဖူးရည်နဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်။ အရမ်းစွယ်စုံပါ ပြင်ဆင်ချိန် -၅ မိနစ် ချက်ပြုတ်ချိန် -၁ ၅ မိနစ် ခြောက်သွေ့ချိန်:၁ ဃ ကယ်လိုရီ67kcal
▢၅ Tsp (၅ Tsp) နို့အမှုန့် gelatin
▢နှစ် oz (57 ဆ) ရေအေး
▢၁ တစ်စက် အရည်အစားအစာအရောင် မလုပ်မနေရ
ရေတိမ်ပိုင်းထဲသို့ရေလောင်းပါ။ gelatin ရေပေါ်မှာအညီအမျှဖြန်းခြင်းနှင့်5မိနစ်စုပ်ယူကြကုန်အံ့
မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်သည်စက္ကန့် ၃၀ ကြာလျှင်အပြည့်အဝအရည်ပျော်ရန်လိုအပ်ပါကနောက်ထပ် ၁၅ စက္ကန့်ကြာအောင်လှုပ်နှိုးပါ
၅ မိနစ်ကြာထိုင်။ ပူဖောင်းများသည်မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့တက်လာပြီးအဖြူရောင်အမြှုပ်တစ်ခုဖြစ်လာမည်။ ဤအမြှုပ်ကိုဇွန်းဖြင့်ဖယ်ရှားပြီးဖယ်ထုတ်ပါ
ယခုသင်ဤအခြေခံစာရွက်ကိုသတ္တု၊ အစားအစာအရောင်၊ ပြောင်းဖူးရည်နှင့်သင်လိုအပ်သမျှကိုပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာကွန်တိန်နာထဲမှာဖုံးလွှမ်းကျန်ရှိသောသိုလှောင်။
ကိတ်မုန့်ကနေလာသကဲ့သို့တစ် box ကိုကိတ်မုန့်အရသာအောင်ဘယ်လို